Mkpughe E Kpugheere Jọn 8:1-13
8 Mgbe o+ meghere nke asaa n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ,+ eluigwe dara jii ruo ihe dị ka nkeji iri atọ. 2 Ahụkwara m ndị mmụọ ozi asaa+ ka ha guzo n’ihu Chineke. E nyekwara ha opi asaa. 3 Mmụọ ozi ọzọ wee bịa guzo n’ebe ịchụàjà.+ O ji arịa ọlaedo nke a na-etinye insens.* E nyekwara ya nnukwu insens+ ka ọ mụnye ya ọkụ n’elu ebe ịchụàjà e ji ọlaedo rụọ,+ nke dị n’ihu ocheeze ahụ. Ọ ga-amụnyekwa ya ọkụ mgbe a nụrụ ekpere ndị nsọ niile. 4 Anwụrụ ọkụ nke si n’insens ahụ mmụọ ozi ahụ mụnyere ọkụ na ekpere+ ndị nsọ gbagooro n’ihu Chineke. 5 Ma, ozugbo ahụ, mmụọ ozi ahụ si n’ọkụ dị n’ebe ịchụàjà ahụ gụjuo ọkụ n’ihe ahụ a na-etinye insens ma wụda ya n’ụwa. Égbè eluigwe wee gbaa, àmụ̀mà egbuo,+ e nweekwa ala ọma jijiji. Anụkwara m olu dị iche iche. 6 Ndị mmụọ ozi asaa ahụ, ndị ji opi asaa,+ wee jikere ịfụ ha. 7 Mgbe mmụọ ozi nke mbụ fụrụ opi ya, e nwere akụ́ mmiri igwe a gwakọtara ya na ọkụ na ọbara. Akụ́ mmiri igwe a dakwara n’ụwa.+ Otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụwa na nke osisi wee gbaa ọkụ, ahịhịa niile agbaakwa ọkụ.+ 8 Mgbe mmụọ ozi nke abụọ fụrụ opi ya, ihe yiri nnukwu ugwu ọkụ na-agba dara wee daba n’ime oké osimiri,+ otu ụzọ n’ụzọ atọ nke oké osimiri aghọọ ọbara.+ 9 Otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ihe e kere eke ndị dị ndụ n’oké osimiri nwụkwara.+ E mekwara ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụgbọ mmiri kpuo. 10 Mgbe mmụọ ozi nke atọ fụrụ opi ya, otu kpakpando ukwu nke na-enwu ka ọkụ si n’eluigwe daa. Ọ dakwara n’elu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke osimiri nakwa n’elu isi mmiri dị iche iche.+ 11 Aha kpakpando ahụ bụ Ahịhịa Ilu. O mekwara ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke mmiri na-elu ilu. Mmiri ndị ahụ gbukwara ọtụtụ mmadụ n’ihi ilu ha na-elu.+ 12 Mgbe mmụọ ozi nke anọ fụrụ opi ya, e tiri otu ụzọ n’ụzọ atọ nke anyanwụ+ na nke ọnwa na nke kpakpando ihe. E tiri ha ihe a ka otu ụzọ n’ụzọ atọ ha gbaa ọchịchịrị,+ ka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke oge ìhè na-adị n’ụbọchị gbaa ọchịchịrị, otu ụzọ n’ụzọ atọ nke oge ìhè na-adị n’abalị agbaakwa ọchịchịrị. 13 Ahụkwara m otu ugo nke na-efe n’etiti eluigwe, nụkwa ka o ji oké olu kwuo, sị: “Ndị bi n’ụwa ga-ata ezigbo ahụhụ+ n’ihi ihe ga-eme mgbe mmụọ ozi atọ ndị fọrọnụ ga-afụ opi ha.”+